BOQORKII JACAYLKA OO BANNAANKA YIMID: Sergio Aguero Oo Jacaylkiisa Cusub Bannaanka Keenay Iyo Gabadhii Uu Hore Ula Sheekaysanayey Oo Ka Guuray – Cadalool.com
BOQORKII JACAYLKA OO BANNAANKA YIMID: Sergio Aguero Oo Jacaylkiisa Cusub Bannaanka Keenay Iyo Gabadhii Uu Hore Ula Sheekaysanayey Oo Ka Guuray
Xiddiga reer Argentine ee Sergio Aguero, waxa uu hore u guursaday gabadh uu dhalay halyeygii ay isku waddanka ahaayeen ee Diego Armando Maradona, laakiin way kala tageen ka hor intii aanu kusoo biirin Manchestere City.
Waxa uga dambeeyey warar kale oo ku xidhiidhinaya gabadh uu dhalay ciyaartoy hore oo caan ahaa oo u ciyaari jiray xulka qaranka England, kana shaqaysa Telefishan, balse warkaas mid kale ayaa ka dambeeyey.
Aguero ayaa toddobaadkan kasoo baxay muuqaalka hees ay qaadday fannaanadda reer Argentine ee Tini Stoessel, xilli ay kooxdiisu ku mashquulsan tahay isku diyaarinta kulamada uga hadhsan horyaalka Premier League oo ay tahay inay guul ka keenaan si ay ugu guuleysan karaan.
Sida uu soo bandhigay wargeyska The Sun ee kasoo baxa waddanka UK, laacibka reer Agentine ayaa waxa uu xidhiidh hoose ka dhexeeyey fannaanaddan, waxaana uu usoo ifbaxayaa si qunyar-qunyar ah, iyadoo uu baaba’ay xidhiidhkii uu la lahaa gabadha reer Ingiriis ee uu ciyaartoyga weyni dhalay.
“Inkasta oo qisada jacaylka aanay caddaysanin, sidoo kalena dafirin, haddana waxa uu 30 jirkani ku lug yeeshay heesaheeda, waxaana muuqata inay waqti fiican wada qaateen xilligii la duubayey muuqaalka, waxaanu wali Aguero raadinayaa gacaliso cusub kaddib intii ay kala tageen inantii uu dhalay Diego Maradona.” Sidaas ayuu wargeysku ku yidhi qoraalkiisa, isagoo dhinaca kale tilmaamay inay jiraan caddaymo muujinaya in xidhiidhka jacayl ee lamaanahan uu meel fiican marayo.